ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “ဦးရှံစားနှင့် ထူးဆန်းပွေလီ အမှုကြီး”
အစိုးရ က အကွက်ဆင်ထားဦး၊ေ(ဒါကလဲ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး)ဒ်ါစုကြည်က အဲဒီ အချိန် လုံခြုံရေးတွေ အကြောင်းကြားရင် ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး၊ အခုတော့ ထမင်ကျွေးပြီး ညအိပ် တည်းခိုခွင့်တောင် ပေးလိုက်သတဲ့။ အပြစ်ရှိတာ ထင်ထင်ရှားရှားကြီးပါ ခင်ဗျာ။ တရားဥပဒေကို ချိုးဖောက်ပြီးလာတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို တာဝန်ရှိသူထံ အကြောင်းမကြားပဲ လက်ခံအားပေမှု့ဟာ ရာဇ၀တ်မှု့မြောက်မှန်း လူတိုင်း သိပါတယ် ခင်ဗျာ။
မောင်လမ်းသစ် မလဲ ဒီအရူးတွေကို ကာကွယ်လှချည်လား။ အစကတည်းက တိုင်ထားတဲ့ လူတယောက်ကို ပြည်ဝင်ခွင့် ဗီဇာပေးကတည်းက သူတို့ အပြစ်ဖြစ်သွားပြီလေကွာ။ ခိုးဝင်ဖူးတဲ့ လူကို ဗီဇာပေးတယ်၊ အထဲကို ခေါ်သွင်းတယ် သူတို့က ပိုတောင် ရာဇ၀တ်မှုမြောက်သေး။ ကလေးတောင် တွေးတတ်တာကို မောင်လမ်းသစ်လဲ မမြင်ဘူးဆိုတော့ ဟိုအကောင် ဒီအကောင်နဲ့ နှိုင်းရမှာ အကောင်လေးတွေကို အားနာရတယ်။ မင်း ဦးနှောက်က တော့ကွာ...
ကိုလမ်းသစ်ကလည်း လာနောက်နေပြန်ပြီဗျာ။ ကတ်နီပြပြီး အစောင့်တွေခွင့်ပြုလို့ အရှေ့ပေါက်က ၀င်လာမှတော့ တရားဥပဒေကို ချိုးဖောက်ပြီးလာတဲ့လူ ဘယ်ဟုတ်တော့မလဲဗျ။ ပြီးတော့ အကျယ်ချုပ်ကျနေချိန်မှာ ဒေါ်စုအနေနဲ့ သူခိုးဖမ်းပြီးသက်ဆိုင်ရာကို အပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ တာဝန်ရှိတယ်ဆိုပြီး မသတ်မှတ်ထားပါဘူးဗျာ။ နောက်ပြီး ဒေါ်စုက အချုပ်ကျနေတာလေဗျာ။ တရားဥပဒေကို ချိုးဖောက်ပြီး ၀င်လာသူကို လက်ခံထားတယ်ဆိုရအောင် ထောင်ဆိုတာ အကျဉ်းသားက ပိုင်တာလား၊ ထောင်အာဏာပိုင်တွေက ပိုင်တာလား။ ပုန်းနေဖို့ကူညီတယ် ဆိုရအောင်လည်း ၀င်လာတာတောင် ဘယ်အစောင့်မှ အသုံးမကျလို့ မသိတာ ဘာပုန်းနေစရာလိုလဲ။ အားပေးတယ်ဆိုတာကတော့ ပိုတောင်မဟုတ်သေး။ တစ်ခုထပ်ပြောချင်တာက အဲဒီလူဝင်လာခဲ့ပါတယ်လို့ ဒေါ်စုက အမှန်အတိုင်းပြောတာကိုပဲ။ အောက်တန်းကျတဲ့ အဘတို့ဆို ဒီလိုအမှန်ဘယ်ပြောမလဲ။
ကိုပေါရေ ကျွန်တော့်အမြင်ကတော့ တကယ်သာ အဲဒီလို ဆိုရင် ယက်တောက TAXI ကိုသုံးမယ်မထင်ဘူး။ တကယ်သာ အဲလို တက္ကစီနဲ့ လာ ရှေ့ပေါက်က ပေါ်တင်ဝင်ဆိုရင်တော့ စီစဉ်တဲ့ သူတော်တော်ညံသဗျို့။ :P
ကိုပေါရေ.. မိုးတိမ်ညိုပြောတာ ဟုတ်သဗျ.. တကယ်တော့ ယက်တောတည်းတယ်ဆိုတဲ့ Burma Land Hotel က ကြံ့ဖွံ့အပိုင်လို့ ထောက်ပြတာကမှ တော်သေး...
Taxi နဲ့ဆိုတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲဒီဘက်ကိုTaxiပေးမ၀င်ဘူးဗျ။
ဖြစ်နိုင်တာကတော့ ဒီကောင်တွေ(အစိုးရ)အစီအစဉ်နဲ့ ဘဲပို့ပေးလိမ့်မယ်ထင်တယ်။
ဘာအပြစ်မှမရှိသူကို ၆နှစ်တောင် ချုပ်ထားနိုင်တဲ့ တရားဥပဒေပိုင်ရှင် ဘဘများဆိုတော့ ခေါင်းရှုပ်ခံပြီး စေ့စပ်အောင် အမှုဆင်ဖို့ စိတ်မပါတာ နေမှာပေါ့ဗျာ။ တကယ်တော့ ဒီလိုအမှုဆင်တာတောင် တော်တော်ခေါင်းသုံးထားတာဗျ။ ထုံးစံအတိုင်းဆိုရင် နောက်တစ်နှစ်ထပ်ချုပ်မယ်လို့ တုံးတိကြီး ကြေညာလိုက်တာပဲ။
မောင်လမ်းသစ်ရေ လူကလေး စိတ်ကောင်းကောင်းထား ပြီးစဉ်းစားကွာ။ ညာဏ်မမှီရင်လဲ မေးပေါ့နော်။ ဂယောင် ဂတမ်းနဲ့ထင်ရာတွေလျှောက်ပြောမနေနဲ့။
ယက်တောကအပြန် ကဗျာကတော့ တကယ်ရယ်ရပါပေတယ်။ ရေးလည်း ရေးတတ်တဲ့ ကိုပေါ ... ။
BEAUTY LAND ပါ ဘားမားလန်းဟိုတယ်မဟုတ်ပါဘူး
Taxi နဲ့ လာတာကတော့ သိပ်ယုတ္တိမရှိဘူးလို့ ထင်တယ်။ ဒီလိုသာ Taxi နဲ့ လာတာမှန်ရင် Taxi သမားကလည်း နအဖလူ မဟုတ်တဲ့အတွက် အမှုမဖြစ်ခင် ဒီသတင်းက တနည်းနည်းနဲ့ ထွက်မှာ သေချာတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အိပ်ဘက်ကို သွားလို့မရဘူးဆိုတာ Taxi သမားတိုင်းသိပြီးသား အ၀ထိ မှောင်းပေးဖို့ နေနေသာသာ အဲဒီဘက်ကို သွားချင်တယ်လို့ မှောင်းပေးလို့ ရမလားလို့ တကယ်သွားဖို့ မဟုတ်ပဲ စိတ်စမ်းပြီးမေးကြည့်တိုင်းမှာ ဗမာ Taxi သမားတိုင်းဆီက ကြားရတဲ့ တူညီတဲ့ စကားက No တလုံးပဲ ရှိတယ်လို့ ရန်ကုန်က ပြန်လာတဲ့ နိုင်ငံခြားသား အသိတွေဆီက မကြာခဏ ပြန်သိရတယ်။ တကယ်လို့ ဒီလိုနည်းနဲ့ သွင်းမယ်ဆိုရင်တောင် Taxi သမားကို သူတို့လူထဲကပဲ အထူးသီးသန့် ရွေးထားမှ ဖြစ်မယ်။ ဒါတောင် နိုင်ငံခြားသားတယောက် Taxi နဲ့ ဘယ်နေ့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည်အိမ်သွားတဲ့ လုံခြုံရေးချထားတဲ့ ဂိတ်ကို ရောက်သွားတယ် ဆိုတဲ့ သတင်းကတော့ အနည်းဆုံး မျက်မြင် အရပ်သားတွေဆီက ထွက်မှာ သေချာတယ်။ ကိုယ်ကျိုးအတွက် ဆိုရင် ဥာဏ်နီဥာဏ်နက် ဒီလောက်များတဲ့ နအဖမှာ လူတယောက်ကို အနီကဒ်ထုတ်ပေးပြီး ဒီလိုပေါ်တင်Taxi နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အိမ်ကို ပေးဝင်တဲ့အထိတော့ ညံ့လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်မ မထင်ဘူး။ နအဖက ကုန်းလမ်းက ဒီနိုင်ငံခြားသားကို သွင်းလိုက်တယ် ဆိုရင်တောင်မှ သူတို့အစောင့်ကားနဲ့ ခေါ်သွားတာ ဖြစ်မယ်လို့ ထင်တာကမှ ပိုပြီး ယုတ္တိရှိပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီ Taxi သမားဆီက ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းက အခုရထားတဲ့ အချက်အလက်လောက်နဲ့တော့ မခိုင်လုံသေးဘူးလို့ ကျွန်မထင်တယ်။
media တိုက်ပွဲ . . media တိုက်ပွဲ.... ဆိုပြီး. . ထင်ရာမြင်ရာတွေရေး . . ပြည်တွင်းက ယုံလွယ်တတ်တဲ့ သူတွေကိုသွေးထိုး... အဲဒီလူတွေက ပြည်တွင်းမှာ ဒုက်ခတွေရောက် . . ခင်ဗျားတို့ကတော့ computer တွေdollar တွေနဲ့
ပြည်သူတွေအတွက် . . . ဒီမိုကရေစီ အရေးအတွက်လို့အော်ပြီး . . . ပြည်တွင်းကပြည်သူတွေ ဒုက်ခရောက်အောင် ပေါက်ကရ အရူးချီးပန်းလျှောက်ရေးနေတဲ့သူတွေ ချီးပန်းပီးလျှောပါစေ :D
နအဖထောင်ချောက်ဆင်တာ လယ်ပြင်မှာ ဆင်သွားသလိုထင်ရှားနေတဲ့ကိစ္စ ။ စကားစပ်ပြီးငြင်းနေကြဦးမယ်ဆိုရင် အချိန်ကုန်တာပဲရှိမယ် ။ http://khinmamamyo.blogspot.com/2009/05/blog-post_17.html ( ကောက်ရိုးမီးတောက်ကို ကျော်လွန်၍၊ မီးကုန်ယမ်းကုန် အဆုံးသတ်တိုက်ပွဲဆီသို့ )
Ko paw, the words in poem"yae thant buu so" or "kho", anyway it's great..go ahead, mg lam thit also go ahead ur barking wz stupid words as long as making money to serve ur mum n relatives by serving for SPDC.
I don't believe that yettaw tookataxi, but I'm sure so many taxi pass daily until 6:00PM on that road.
ကဲ... ကိုပေါရေ... ကိုမျိုးမြင့်မောင်တို့ရေ... ထွက်ကြစို့လေ... ဘာလုပ်နေကြတာတုန်း....
မိုက်တယ်ဗျာ။ စဉ်းစားတတ်တယ်။ ဘန်ကီမွန်းတို့ တောင် ကိုကြီး လမ်းသစ်လောက် မစဉ်းစားတတ်ဘူး။ သူတို့ က စစ်အစိုးရ အပြစ်လို့ ပဲ မြင်နေကြတယ်။ ကိုကြီး လမ်းသစ်လို့ အတွေးအခေါ် ဆန်းဆန်းလေးတွေ မရှိကြဘူး။ နောက်တစ်ခါ ကုလသမဂ အတွင်းရေးမှုးချုပ် နေရာလပ်ရင် ကိုကြီးလမ်းသစ်ကို ထောက်ခံမယ်ဗျာ။ ဘယ်နှယ့်လဲ။ သွားလုပ်မလား။ ကိုကြီးလမ်းသစ် အခုလို ဘလောဂါ လောက မှာ ID မဲ့နေတာ အရမ်းအောက်ပါတယ်ဗျာ။ စုတ်ပဲ့ပါတယ်။ Real ID လေးနဲ့ ကိုပေါတို့ လို ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်နေပါလား။ ကျွန်တော်တို့ လဲ ပေါ်တင် ထောက်ခံရတာပေါ့။ ကိုကြီးဆို ပေါ်တင်ပြောလဲ ထောင်ချ မခံရလောက်ပါဘူးး ဘာမှ မကြောက်ပါနဲ့ ။ ကိုကြီးနောက်မှာ အနော်တို့ ရှိတယ်။
ထွက်လို့အားပေးတာတောင် နာမည်ဝှက်နဲ့ပါလား။ ထွက်ရမှာ အားရှိပ။ ဆန္ဒတွေစောပြီး ကိုယ်မလုပ်ရဲတာတွေ သူများကို ဇွတ်တိုက်တွန်း မနေစမ်းပါနဲ့ဗျာ။ စလုံးအစိုးရကို တပတ်ရိုက်ဖို့ စဉ်းစားပါရစေဦး။ အခုတောင် ညာတာပါတေးနဲ့ စကားလာနှိုက်နေတာ။
ကိုပေါ ငိုအားထက်ရယ်အားသန် ဖြစ်နေပြိ ကဗျာက ကောင်းတယ်
Mg Lan Thit...Go to hell..stupid..idiot..shit....Fucking idiot....
ယပ်တောင် ဆိုကာမှ ယပ်တောင် အလုပ်ပဲ လုပ်မှာ ပေါ့ဗျာ... ခင်ဗျားတို့ရော... ခင်ဗျားတို့ အလုပ် ဘယ်တော့လုပ်မှာ လဲဗျ...
လမ်းသစ်ရေ ကိုယ်ဖာသာ ကြွင်းတူး ပြီးမြန်မြန်သတ်သေလိုက်တော့ကွာ
kyaw ရေ မှန်တာတွေပြောပေးမှ ပြည်တွင်းကလူတွေပိုသိလာမှာပေါ့
ပြည်သူတွေ ဒုက္ခရောက်တာ သောက်သုံးမကျတဲ့ အစိုးရကြာင့်ပါ
စစ်အာဏာရှင်စနစ် ကျဆုံးရေး ဒို့အရေး
အလုပ်ဆိုပြီး ကိုင်ပြောနေတာ လခပေး၊ ထမင်းကျွေးထားတဲ့ အလုပ်ရှင်လေသံတောင် ပေါက်နေပြီ။ ဘယ်သူကများ ငါတို့ကို ခန့်ထားလို့ မင့်အလုပ်၊ ငါ့အလုပ် ဆိုပြီး တရားသေ ခွဲနေရတာတုန်း။ မင်းလိုသာ တာဝန်ယူတတ်ကြေးဆို ငါလည်း ငါ့အလုပ်က ပရိတ်သတ်အလုပ်လို့ ပြောပြီး ရဲရဲကြီး တာဝန်ယူတတ်တာပေါ့။ လူတွေထွက်ရင် လက်ခုပ်သီးပြီး အားပေးမယ်။ ရှုံးရင် ၀မ်းနည်းပြမယ်။ အာဇာနည်တွေ သေရင် ပန်းခွေချပေးမယ်။ နိုင်တဲ့တစ်နေ့ သူရဲကောင်းတွေကို ပန်းကုံးစွပ်ပြီး တော်လှန်ရေးတလျှောက် တာဝန်ကျေလာခဲ့တဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင် ဂုဏ်ယူလိုက်ဦးမယ်။ ကဲ ဘယ်လောက်နိတ်တဲ့ အလုပ်လဲ။
မင်းမှာလုပ်သင့်တယ် ဆိုတဲ့အသိရှိရင် ကိုယ်တိုင်လည်း နိုင်သလောက် ၀င်လုပ်ပါလား။ သူများကိုချည်း လက်ညှိုးထိုး ခိုင်းတတ်ရအောင် မင်းက သန်းရွှေမယားပါသား မို့လို့လား။ ဒီလိုပြောလို့ ကိုလမ်းသစ်က သူ့အဘဘက်ကတောင် ၀င်နာနေဦးမယ်။ တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က တတ်နိုင်သလောက် ပါဝင်သင့်တယ် ဆိုတဲ့ စကားကို ပေါ့ပြက်ပြက် ယူမသုံးစမ်းပါနဲ့ကွာ။ အဓိပ္ပါယ်ရှိရှိ ပါဝင်ဖို့ အားထုတ်စမ်းပါဦး။ ထွက်ကြတော့လေလို့ ပြောတာထက် ထွက်ကြစို့ဗျာလို့ ပြောကြည့်ပါလား။
မောင်လမ်းသစ် ဒီနေရာမှာ မှားသွာတာ အားလုံးသိလောက်ပါပြီ. နောက်တစ်နေရာ ကိုသွားကြစို့